Mandria any Bali " Journey-Assist - Fampahalalana mahasoa momba an'i Bali
Fantatra voalohany amin'ny Bali
Misy fampahalalana amin'ny antsipiriany misimisy kokoa ao amin'ireo fizarana mifandraika amin'ireo rohy:
Bali dia nosy ao amin'ny Nosy Archipelago, izay ao amin'ny faritany Bali any Indonezia. Amin'ny lafiny atsimo dia nosasan'ny Ranomasimbe Indianina i Bali, avaratra - ny ranomasina Bali, izay ampahany amin'ny Oseana Pasifika. Any andrefana dia tafasaraka amin'ny manodidina i Bali. Java Selrait of Java, atsinanana manodidina. Ny Lombok Bali dia misaraka amin'ny Selat Lombok. Faritra Bali - 5780 sq. km, ny halavany avy any andrefana ka hatrany atsinanana - 145 km, avy any avaratra ka hatrany atsimo - 80 km.
Bali no nosy farany andrefana amin'ny vondrona Sunda kely. Avy any atsinanana ka hatrany andrefana, Bali dia mamelatra tandavan-tendrombohitra miavaka amin'ny hetsika volkano avo.
Volkano 2 miasa lehibe - Agung (haavo - 3142 m) sy Gunung Batur (hahavony - 1717 m), no hita any avaratra atsinanan'ny nosy.
Ny haavon'ny tampon'isa hafa dia Batukau (hahavony - 2278 m) ary Abang (hahavony - 2152 m). Ny tampon-kavoana fidiran'izy ireo dia misy lemaka vatosokay any atsimo, antsoina hoe bukit, ary mizara ny nosy iray manontolo ho faritra 2 samy hafa be.
(Vakio bebe kokoa momba ny toetr'andro, ny toetrandro ary ny fizaran-taona any Bali eto)
Ny isotherm isan-taona dia miavaka amin'ny fiovan'ny toetr'andro manodidina ny +26. Ao amin'ny trano fandraisam-bahiny sy any amin'ny faritra iva, ny hafanana mijanona amin'ny alina, raha any an-tendrombohitra kosa ny alina dia mangatsiatsiaka be. Ny maripanan'ny rano amoron-dranomasina dia matetika ao anatin'ny + 26 ... + 28.
Betsaka koa ny hazo volotsangana ao amin'ilay nosy, indraindray mahatratra 40 sm ny savaivony.Mitombo saika manerana ny nosy izy ireo. Ny volotsangana dia fitaovana fananganana mahazatra any Bali.
Denpasar (mponina 856) no tanàna lehibe indrindra eto amin'ny nosy, ivon'ny fitantanan-draharaha amin'ny faritanin'i Bali.
Singaraja (mponina 118) dia ivon-indostrialy any amin'ny morontsiraka avaratry ny nosy, ilay foibem-pitantanana teo aloha (hatramin'ny 000) any Bali.
Kuta dia iray amin'ireo tanàna fialantsasatra lehibe any Bali.
Ubud (mponina 75) no ivon-toerana lehibe indrindra amin'ny kolotsaina miavaka eo an-toerana sy ny fon'ny Bali.
South Bali dia ivon'ny fampandrosoana ny asa-tanana; manokana, ny akanjo dia novokarina tany Kuta. Miorina amin'ny fampiasana ny asan'ny mponina eo an-toerana ny jono, fa ny mpiasa avy amin'ny hafa, eny fa na dia ireo nosy mahantra kokoa aza dia manintona ihany koa, izay manaiky ny hiasa amin'ny vola kely.
Ny ankamaroan'ny mponina ao Bali (83,5%) dia manaraka ny fironana manokana amin'ny Hindoisma - Agama Hindu Dharma. 13,3% amin'ny mponina ao an-toerana dia Silamo. Any amin'ny tanàn-dehibe no tena ifantohany. 1,7% ihany ny kristiana ary 0,5% ny bodista. Ny vondrom-piarahamonina kristiana sy bodista dia ny sinoa ihany (ampahany kely amin'ny mponina indizena ao amin'ny nosy) sy ny vahiny avy any aostralia sy eropa andrefana (anglisy, holandey, frantsay, italianina, sns.) Monina any Bali efa ela.
Ny mponina eo an-toerana dia manana kolontsaina manankarena, miseho, indrindra, amin'ny asa tanana. Bali dia malaza amin'ny sary sokitra hazo, firavaka, sary hosodoko, mozika, dihy. Ny asa-tanana dia batik, izay mandoko amin'ny landy na landy. Iray amin'ireo seho tany am-boalohany indrindra ny dihy ao an-toerana ataon'ny vondrona lehibe manao akanjo nentim-paharazana. Ny tena mahaliana sy malaza amin'izy ireo dia Kecak sy Barong.
Ny ivom-pitaterana lehibe indrindra eto an-toerana dia ny seranam-piaramanidina Ngurah Rai. Avy eo hatrany Kuta 2,5 km, hatrany Sanur - 12 km, hatrany Denpasar - 13 km.
Ny fitateram-bahoaka mahazatra any Bali dia minibus kely antsoina hoe bemo. Misy orinasa minibus maromaro toy izany miasa ao amin'ny nosy.
Ny fitaterana olona mahazatra indrindra eo amin'ny mponina dia ny moped sy ny scooter. Betsaka ny orinasa manofa fiara sy moto any Bali.
I Ubud no tena fon'ny Bali. Ny mpanao asa tanana izay nahatanteraka ny zavakanterany hatramin'ny taranaka fara mandimby dia mamorona fahagagana tena izy. Ny zavatra sasany dia toy izany ka tsy azo inoana fa tanan'olombelona no anaovana azy ary tsy mampiasa fitaovana avo lenta.
Miandry ny fisokafan'ny sisintanin'i Bali aho, ary te handeha any amin'ny trano maharitra miaraka amin'ny vadiko.
Bali tsy mpizahatany dia toerana voalanjalanja (fanahy + vatana) izay ahazoana aina kokoa ao anatiny kokoa noho ny any amin'ireo tanàna voadio any Eropa na Amerika.
Raha misy manindrona. Faly izahay mahita anao eto 🙂